ktmkhabar.com - यी बलिउड निर्देशकले लिन्छन यति धेरै पारिश्रमिक, सुन्दा परिन्छ चकित !
यी बलिउड निर्देशकले लिन्छन यति धेरै पारिश्रमिक, सुन्दा परिन्छ चकित !
आइतबार, चैत्र २० २०७८
बलिउड सधैं ठूला बजेट फिल्महरु निर्मान हुन्छन् । निर्माताहरूले हरेक फिल्मका लागि चर्काे खर्च गर्ने गर्दछन् । चलचित्रका कलाकारहरुले पनि काम गरेबापत चर्को पारिश्रमिक लिने गरेका छन् ।
यस्तै बलिउडमा धेरै निर्देशक छन् जो अभिनेता जत्तिकै चर्चित छन् ।
आफ्नो फिल्मका लागि करोडौं पारिश्रमिक लिने गर्छन् । तपाईलाई थाहा छ कि फिल्म स्टार बाहेक निर्देशकले फिल्मको कति पारिश्रमिक लिन्छन् ।
बाहुबली र आरआरआर जस्ता सुपर हिट फिल्म दिने निर्देशक एसएस राजामौली आफ्नो क्लासिक र भव्य फिल्मका लागि परिचित छन्। निर्देशक एसएस राजामौलीले एक फिल्मका लागि १०० करोड रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिएका छन् ।
बलिउडका रोहित शेट्टी आफ्ना फिल्महरूमा उत्कृष्ट एक्सन दृश्यका लागि परिचित छन्। कमेडी फिल्ममा डेब्यु गरेसँगै उनले सिंघम र सिम्बा जस्ता एक्सन ड्रामा फिल्म पनि दिएका छन् । यदि हामी शुल्कको कुरा गर्छौं भने, रिपोर्टहरू अनुसार, रोहित शेट्टीले आफ्नो एक फिल्मको लागि लगभग 25 करोड पारिश्रमिक लिन्छन्।
सञ्जय लीला भन्साली
बलिउड निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीले बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, राम लीला जस्ता एकभन्दा बढी उत्कृष्ट फिल्महरू दिएका छन्। सञ्जय लीला भन्सालीका फिल्महरूमा भव्य सेट र रोयल्टी सबैतिर देखिन्छ।
एक रिपोर्टका अनुसार सञ्जय लीला भन्सालीले आफ्नो कुनै फिल्मको लागि कुनै निश्चित शुल्क नलिने तर फिल्मबाट हुने नाफामा सेयर गर्छन् ।
धर्मा प्रोडक्सन कम्पनीका सञ्चालक करण जोहर निर्माता हुनुका साथै चलचित्र निर्देशन पनि गर्छन् । उनको निर्माणमा बलिउडमा धेरै सुपरहिट र मेगा बजेट फिल्म बनेका छन् । यदि फिल्म निर्देशनको कुरा गर्ने हो भने करण जोहरले एउटा फिल्मको करिब १२ करोड भारु लिन्छन् ।
दक्षिण निर्देशक मणिरत्नम पनि फिल्म उद्योगको ठूलो नाम हुन् र उनले दक्षिण भारतीय सिनेमालाई धेरै हिट दिएका छन्। पारिश्रमिकको कुरा गर्दा, एक रिपोर्टका अनुसार निर्देशक मणिरत्नमले एउटा फिल्मका लागि करिब ९ देखि १० करोड भारु लिने गर्छन् ।
गरिबीले १० वर्ष अफगानिस्तान र इराकको ५० डिग्रीको घाममा लेबर काम गरेका हर्क साम्पाङको यस्तो जीवन कहानी !
पपगायिका रिहाना बनिन् आमा
माओवादी काठमाडौँका चर्चित नेता अधिकारीले पार्टी छाड्नुको रहस्य अर्कै, गगन थापा बने कारण !
पीडितले बयान फेर्दैमा पल शाह जेलबाट छुट्छन् ?
‘केजीएफ २’ ले पहिलो दिन कति कमायो ?
१०० वर्ष अघि यस्तो थियो काठमाण्डौ, हेर्नुहोस् (दुर्लभ ११ तस्बिरसहित)